Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Jowhar Oo uu ka Bilawday Wacyi Gelinta Maandoriyaha
Jowhar Oo uu ka Bilawday Wacyi Gelinta Maandoriyaha
Kooxo utababaran in ay Bulshada ka Wacyi geliyaan Halista Maandooriyaha ayaa olale ka dhan ah isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya ka bilaabay iskuulaadka qaar ee degmada jowhar.
kooxaha ayaa ah kuwo sida fariimo ay ku muujinayaan dhibaatada laga dhaxlayo isticmaalka maandooriya sida kaniinka, cirbadaha. xashiishka, taabuuga, qaadka,sigaarka tubaakada noocadeeda kala duwan iyo waxyaabaha la midka ah.
fariin sidayaasha oo ka socda hay,addaha Somali peace line iyo Life and peace institute ayaa waxa ay arday iyo maamulada iskuulaadka ay gudoonsiinayaan waraaqado ay ku daabacan yihiin halista lagala kulmayo maandooriyaha.
kooxahani ayaa waxa ilaa iminka usuurta gashay in ay qaar ka mid ah dhalinyarada ka wacyi geliyaan sharwade TAABUU oo ah kan inta badan dhibaatada ka dhex abuura Barayaasha iskuulada iyo Ardayda ay wax baraan, taas oo mararka qaar ay dhacdo in ardayda Macalimiinta ku dhahaan macalin naga jooji cayaarta darbisaar ayaa cayaareysa iyo ereyo la mid ah taasi oo ka dhigan in ardayga ay la noqoto in macalinta xiisada Bixinaya in uu iska cayaarayo waayo maanta ayaa maqan.
dhaqaatiir badan ayaa digniino kala duwan ka soo saaray guud ahaan Maandooriyaha iyo si qalad u isticmaalida Dowada loogu tala galay in lagu tacaalo xanuun jira balse ay dadka qaar dhaxal siiyo cudur uusan hore uqabin sida in xanuun baabi,iye si isdabajoog ah loo adeegsado in uu maandooriye isku badalo.
olalaha haatan jowhar ka socda ayaa la rajeynayaa in wax badan uu ka badalo dhibaatada maandooriyaha uu ku haayo.